ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်ပေါင်းစုံ အီလက်ထရွန်နစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ မန္တလေးမြို့တွ? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ အောက်တိုဘာ ၁၃- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်ပေါင်းစုံ ပထ မဦးဆုံးအကြိမ် အီလက်ထရွန်နစ် အားကစားပြိုင်ပွဲ (E –Sport) ကို မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ကျုံးအရှေ့ဘက်ရှိ အမျိုးသားက ဇာတ်ရုံတွင် အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့သည်။
ရှေးဦးစွာ အခမ်းအနားကို တာဝန်ရှိသူများက ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့် လှစ်ပြီး မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဦးကျော်စွာစိုးက အ ဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားသည်။ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များအသင်းမှ ဦးရဲမြတ်သူ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာနည်း ပညာရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဥက္ကာကျော်တို့က တက္ကသိုလ် ပေါင်းစုံ အီလက်ထရွန်နစ် အား ကစားပြိုင်ပွဲ (E –Sport)နှင့် ပတ် သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
¤င်းနောက် တက္ကသိုလ် ၁၆ ခုမှ ကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သော အသင်းသားများနှင့် မိတ်ဆက်ကြသည်။ ယင်းနောက် တက်ရောက်လာသော တာဝန်ရှိ သူများနှင့် ပရိသတ်အားလုံးတို့ က ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်အလံအား အလေးပြုခဲ့ သည်။ ထို့နောက် ဃသျစူပေ ပြိုင်ပွဲ တွင် အီလက်ထရွန်နစ်ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းများ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲကို မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ် ၁၆ ခုမှ ကိုယ်စားပြု ပြိုင်ပွဲဝင်အ သင်း ၁၆ သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ ပြီး တစ်သင်းလျှင် ကစားသမား ငါး ဦး ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ပြိုင်ပွဲကို အီလက်ထရွန်နစ် အားကစား(E –Sport) ပေါ်ထွန်း လာစေရေး၊ ကျောင်းသားများအ နေဖြင့် Professional အဆင့်သို့ တက်လှမ်းနိုင်စေရေး၊ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များအချင်းချင်း Community ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေး၊ IT လောက နိုင်ငံတကာအဆင့် တက်လှမ်းလာနိုင်စေရေး စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်မှ ၁၄ ရက်ထိ နှစ်ရက် ကြာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လားရှိုးနှင့် ရေပူကြားရှိ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးကို ရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်၊ ယာဉ် ၁၁ စီးပေ
ခြေစမ်းပွဲတွင် ဘိုလစ်ဗီးယားအသင်းက မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းကို သုံးဂိုး-ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင?
လက်နက်များ သိမ်းဆည်းရမိမှု ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် လုံခြုံရေ?